(जानी राखौँ) -पुरुषका नजरमा ठूला स्त:न किन आकर्षक मानिन्छन् ? -
Home मनोरन्जन (जानी राखौँ) -पुरुषका नजरमा ठूला स्त:न किन आकर्षक मानिन्छन् ?
(जानी राखौँ) -पुरुषका नजरमा ठूला स्त:न किन आकर्षक मानिन्छन् ?
स्त: न बढाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता उपाय अपनाउनुहोस् – शिशुको लागि अमृत मानिने स्त:न उ’त्तेजित अंगपनि हो । स्त:न शिशुका लागि दूध बनाउन मात्र होइन् । यौ:नका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्त:नको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ ।